Manchester City Oo Sare U Qaaday Qiimaha Ay Ku Soo Iibsaneyso Jack Grealish Iyo Harry Kane
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester City oo Sare u qaaday Qiimaha ay ku soo iibsaneyso Jack Grealish iyo Harry Kane
June 9, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda heysata horyaalka Premier League Manchester City ayaa rajeyneysa inay kordhineyaan oo gaarsiiyaan 70m £ si ay ugu dhaqaaqaan xidiga Aston Villa ee Jack Grealish iyo Tottenham Hotspur laacibkeeda Harry Kane , sida lagu sheegay warbixin.
Pep Guardiola ayaa isha ku haya inuu sii xoojiyo kooxdiisa, waxaana uu u aqoonsaday labada xiddig ee reer England labo bartilmaameed oo muhiim ah.
Xiddigaha joogtada ah ee kooxda koowaad Raheem Sterling , Gabriel Jesus , Riyad Mahrez iyo Ilkay Gundogan , ayaa dhamaantood isha ku haya kooxo ka socda Spain iyo Italy, kaliya labo sano ayaa uga harsan qandaraasyadooda, City ayaana laga yaabaa inay tixgeliso inay ugu yaraan lacag ka hesho mid ka mid ah xiddigahan.
Dhanka kale, xiddigo ay ka mid yihiin Jack Harrison , Lukas Nmecha , Pedro Porro , Yangel Herrera , Ivan Ilic iyo Morgan Rogers ayaa dhammaantood amaah ku qaatay Yurub oo dhan xilli ciyaareedkii hore waxayna u badan tahay inay xagaaga si rasmi ah ugu dhaqaaqi doonaan.
Harrison, oo seddexdii sano ee ugu dambeysay amaah kula qaatay Leeds United , ayaa aad ula dhacsan Marcelo Bielsa , kooxda ayaana qarka u saaran inay 13 milyan oo ginni ku iibsato qandaraaska ciyaaryahanka garabka ka ciyaara.
Porro, Nmecha iyo Ilic – oo si ku-meelgaar ah ula joogay Sporting Lisbon, Anderlecht iyo Hellas Verona siday u kala horreeyaan xilli ciyaareedkii hore – dhammaantood waxaa lagu qiimeeyaa ku dhowaad 15 milyan oo ginni, halka Herrera iyo Rogers, oo ololayaal qurux badan la soo qaatay Granada iyo Lincoln City ay labaduba aaminsan yihiin. lagu qiimeeyo in ka badan £ 20m.
The Daily Mail ayaa sheegaya in City ay dooneyso inay qarash gareyso in suuqa mar kale xagaagan, laakiin waxa u baahan doontaa inay iska iibiso ciyaartoy dhowr ah kooxda koowaad.